Nhoroondo yekambani - Xuzhou Goldfire Stove Co., Ltd.
Kubvira 2005, Xuzhou Goldfire Stove Co., Ltd. yakazvipira pachayo kukudziridza uye kugadzira huni inopisa chitofu uye yekunze musasa chitofu. Iyo kambani inosanganisa dhizaini, kutsvagisa nekusimudzira, kugadzirwa, kutengesa uye sevhisi. It muridzi 30 zviuru mativi metres workshop pamwe mukuru mureza kugadzirwa mitsetse, uye anoshandisa indasitiri kutungamirira michina, tsvakurudzo uye kukura vepamusoro chikwata. Zvigadzirwa zvikuru zvakapfuura bvunzo yeEU CE, yasvika kuEcodeign 2022 yakajairwa uye yakawana chitupa cheAmerican EPA. Iyo inozivikanwa neatatu masisitimu epasi rose ehunhu, nharaunda, hutano hwebasa nekuchengeteka.
Iyo fekitori yakawana ISO9001: 2015 certification ine seti yekugadzirwa kwemhando yekudzora sisitimu yekuona mhando uye huwandu hwekugadzira.
Mhando dzedu shanu dzakagamuchirwa nevatengi uye vazhinji vatengi. Kunyanya iyo Goldfire yakagadzira musika unonzwika musika muEU. Tine makambani maviri ekutengeserana ekunze. Makambani maviri aya ane hupfumi hwekunze uye hwekunze ruzivo neruzivo rwemberi rwebasa. Isu tinopa vatengi mhinduro-yekumira kuvabatsira kuwedzera musika.
Xuzhou Goldfire chitofu Co., Ltd.
Bhizinesi chiyero chinosanganisira nzvimbo dzemoto, midziyo yekupisa, mabhaira nemidziyo yekubatsira,
zvekuisa musasa, mabasa emaoko zvichingodaro.
Kugadzira Simba Kuratidzira
Maitiro edu ekutanga anosanganisira kucheka, kupisa, kukwenya, kuungana, kupenda uye kurongedza. Iyo mbishi yekuongorora zvinhu inodzorwa zvakadzama, uye zvisina kukwana mbishi zvinhu zvinorambidzwa kushandisa. Izvo zvinhu, saizi uye muforoma zvinoenderana nemufananidzo kuti uone saizi muunifomu. Imwe neimwe workpiece yakabwinyiswa zvinoenderana nekudhirowa uye chinodiwa. Iko hakuna masara akasimudzwa, hapana unopinza unopinza uye kona. Kupera kwezvikamu zvakapenya zvakatsetseka. Fasteners akaiswa sezvinodiwa kuti ave nechokwadi chekukodzera kwezvikamu zvese zvechigadzirwa. Kupenda hakuna pende yekudonha kana kuyerera pendi ine gomba shoma. Tine nzvimbo yekurongedza yekuchengetedza kutaridzika kwezvigadzirwa uye zvekutakura zvinhu zvakachena uye zvakatsvinda. Hunhu kudzora vashandi vanozoita cheki cheki panguva yese yekugadzira maitiro Izvo chete zvigadzirwa zvinogoneswa zvinopinda mune inotevera maitiro, ayo anogona kuona kuti vatengi vedu vanogashira mhando yepamusoro zvigadzirwa.
Tine ina otomatiki yekugadzira mitsara, Prema muhombe laser yekucheka muchina, gantry CNC plasma yekucheka muchina, CNC inoenderera ichikotama muchina, CNC yekucheka muchina, hombe kumanikidza muchina, gantry yakatwasuka kupfura blasting muchina, gantry crane, forklifts uye mimwe michina nemidziyo. Nekubatsirwa kwemidziyo mitsva, kugadzirwa kwedu kwakawedzera uye nguva yekuendesa inosimbiswa.
Chikwata Uye Kambani Tsika
Isu tinoita zvinhu zvishoma zvakasiyana, uye ndiyo nzira yatinozvida isu!
Chikwata chedu chakaumbwa neboka revadiki post-80s uye boka revanoshuvira post-90s, munhu wese ane izere nebasa kushinga uye mweya webasa.
Yedu yekambani tsika ine zvinhu zvinomwe: mutengi kutanga, basa reboka, kumbundira shanduko, hunyanzvi, kuvimbika, kuda uye kuzvipira. Mubasa redu, isu tinogara tichichengeta tsika yemakambani mupfungwa.
Nekutungamira kwetsika yemakambani, isu tinotenda kuti isu tichawana zvakanyanya uye nekuzivikanwa kwevatengi, isu tinokudziridza zvirinani uye zvirinani.
Bindu Kubika Chitofu, Stainless simbi chitofu, Tende Wood Inopisa Chitofu, Musasa Wood Burner, Kunze Kwehuni Kunopisa, Camping Stove Mvura Tangi,